Toro anatra - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Mampihena ny herin’ny fitadidiana ny fanaovana tsianjery ny lesona
Fomba mahazatra sarotra ialana. Zatra manao tsianjery ny lesona rehetra nianarany ny ankamaroan’ny mpianatra. Maro amin’ny mpampianatra sy ny tompon’andraikitra ara-pedagojika anefa no nanoro hevitra fa tsy tsara izany manao tsianjery izany. « Mampihena ny herin’ny fitadidiana ny fanaovana tsianjery ny lesona satria feno loatra ary miasa mafy loatra ny fitadidiana », hoy ny tompon’andraikitra pedagojika iray.
« Raha vao miova kely fotsiny ny firafitry ny fanontaniana na misy teny iray adino noho ny hamaroan’ny lesona hianarana tsianjery dia diso ny valin-tenin’ilay mpianatra », hoy kosa Raharinoro Fidèle, mpampianatra kilasy famaranana.
Ny fahazoana ny lesona, atao araka ny lojika, no tena vahaolana araka ny fanadihadiana natao tamin’ireo mpampianatra. Ankoatra izay dia zava-dehibe ihany koa ny fanaovana fampiharana na fanazarana matetika mba hahazoana tsara ny lesona rehetra mbola tsy hay. Maro amin’ireo mpampianatra mihitsy aza no nanoro hevitra fa manampy be amin’ny fitadidiana ny lesona ihany koa ny fanaovana izany an-kira na avadika ho hira.
« Rehefa hira matetika dia mora amin’ny ankizy ny mandray azy. Ny lesona ihany koa anefa azo atao tononkira », hoy hatrany ireo mpampianatra.
Azo atao ihany koa ny manao fanamarihana madinika mba ahamora ny fitadidiana. Ohatra ny famantarana ny kely sy ny lehibe (< sy >) izay mbola manahirana ny maro, ka izay tondroin’ilay maranitra iny foana no kely.
Tsy tsara manonona lesona be fahatany koa ny mpampianatra fa ampitaina amin’ny alalan’ny fanazavana mafonja fotsiny dia mety.
Lahatry ny fiainana – Sambany no noesoriny ny peratra mariazy teny an-tanany (0)
SOMPATRA TOKOA NY FIAINANA. VOADONAN’NY MOTO KA MATY TSY TRA-DRANO TETSY AMBOAROY-AMBOHIJANAHARY I LIVA NA RAKOTONDRABE LIVANIRINA SYLVAIN, RAIM-PIANAKAVIANA 31 TAONA.S AMBANY TAMIN’NY ALATSINAINY HERINY LASA TEO, NOESORIN’I LIVA NY PERATRA MARIAZY TENY AN-TANANY, NANDRITRA IZAY ROA TAONA NIVADIAN’IZY IREO. TSY ILAY PERATRA IRERY ANEFA NO NIALA TENY AN-TANANY FA IZY MIHITSY NO NANDAO NY
Fanadihadina manokana LAPAN’NY FANATANJAHATENA – MAHAMASINA «Seho tokana» hiarahana amin’i Dayvide sy ny antoko mpihirany Hanome fahafaham-po ireo mpankafy mialoha ny hiatrehany indray ny fianarany. Hanolotra seho tokana, etsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina Mahamasina i Dayvide sy ny tariny, ny alahady 16 jona izao, manomboka amin’ny 3 ora tolakandro. Hetsika izay mifanandrify indrindra amin’ny fetin’ny Ray ka hanasany ny fianakaviana rehetra amin’ny fiarahana midera an’Andriama­nitra. «Ho fitsinjovana ny fianakaviana mihi­tsy ny nanaovana ny vidim-pidirana ho Ar 2 000 mba hahafahan’ny mpianakavy miaraka amin’ny seho», araka ny fanazavan’i Dayvide. Ity no seho an-tsehatra voalohany sady tokana entiny eto Antananarivo ka hiarahany amin’ireo mpitendry sy mpandihy ary antoko mpihira izay natsangany sy notsongaina avy amin’ny fikambanan’ny mpankafy. Hoentin’i Dayvide ao anatin’ny fampisehoana ireo nampitondrainy ny lohahevitra hoe: «Fiderana ahazoantsika tso-drano tena lafatra». Jay-audio no hiantsoroka ny fanamafisam-peo sy ny hazavana. Efa hita eny anoloan’ny Tahala Rarihasina Analakely, Tia Com Analakely, Jumbo Score ary Tonny Pizza Ampefiloha. PIMENT CAFE – BEHORIRIKA Haneho ireo mozika gasigasy ny tarika Zandry Gasy Tarika niorina tamin’ny fiandohan’ny taona 2011. Haneho ireo karazana mozika gasigasy miaraka amin’ny gitara ny tarika Zandry Gasy, anio alina manomboka amin’ny 9 ora, etsy amin’ny Piment Café Behoririka. Fanandratana, fikarohana ary fiangaliana ny hira malagasy, indrindra ny ba gasy tendrena an-gitara no tena tanjon’ny tarika. Tafiditra ao anatin’izany ny famelomana ireo hira taloha sy ireo efa vakoka. Ao anatin’izany ireo hiran’ny taona 70 sy 80. Santionany amin’izany ny «Ny fifaliana ry lahy», «Iasitera»… Ao anatin’izany koa ny hiran’ny tarika Riambetso, Levelo, Rastefa, Maurice Razafy, Tselonina, Rambao… Hanampy ireo ny hira izao vokatry ny famoronanan’ny tarika Zandry gasy, izay ahitana an’i Mbola (feo sy gitara), Hoby (gitara), Fitahiana (feo) ary Ony (feo). AFT ANDAVAMAMBA Pop rock hiarahana amin’ny tarika Anay Toarian’ny namoahana ny rakikira voalohany, ny volana desambra, dia miroso amin’ireo seho samihafa ho fampahafantarana izany ny tarika Anay. Hanohy ny seho ary hiantsehatra indray etsy amin’ny Alliance française (Aft) Andavamamba ry Anthony sy ny tariny, ny tolakandron’ny alahady 16 jona izao, manomboka amin’ny 3 ora tolakandro. Araka ny efa nahafantarana azy hatramin’izay dia ny gadona Pop Rock no voizin’ny tarika Anay ary anisan’ireo efa ahafantarana ny tarika amin’ireo haino aman-jery samihafa ny «Ratram-po», «hiara-hilalao» izay lohatenin’ny rakikira voalohany rahateo. Raha tsiahivina, fitambaran’ny tarika Groum’s sy Anthony (Pazzapa) ny niteraka ny «Revolution» izay niova anarana ho Anay, tamin’ny 2011. Ankoatra an’i Anthony (hira sy gitara), dia mandrafitra ny tarika Anay ry Tam’s (Amponga maroanaka), Khelly (Beso), Hasina (Gitara) ary Navalona (vata maroafitsoka). ANTANINARENINA Roa andro ho an’ny Jazz @ tohatoha-bato Hetsika fanao isan-taona izay hiarahana amin’ny tanànan’Antananarivo renivohitra. Anisan’ny zava-baovao amin’ny “Jazz eny @ tohatohabato” ny fanaovana ny hetsika ao anatin’ny roa andro etsy amin’ny tohatohabaton’Antaninarenina ny sabotsy sy ny alahady izao. Ho fisantarana ny hetsika dia hisy anio ny seho ho an’ireo olona nasaina etsy amin’ny Lapan’ny tanàna. Hanomboka rahampitso kosa ny roa andro ho an’ny etsy amin’ny tohatohabato Antaninarenina. Toy ny mahazatra, mpanakanto maro amin’ny gadona samihafa sy sokajin-taona isan-karazany no handray anjara amin’ity andiany fahatelo izy. Vahiny nasaina manokana kosa anefa ny big Band Mo’Zar avy atsy amin’ny nosy Maorisy. Hifandimby haneho ny talentany kosa ry Full Vao Band, Datita Rabeson, Samy Andriamanoro, Joël Rabesolo, Tana Jazz Band, TGC, Issik, Anaa Quatuor, Iz’avy, jazz club du CGM sy ny an’ny Alliance française. Hanokatra ny seho ny alahady kosa ny Tambours gasy sy Volahasiniaina Linda izay haneho sy hitondra lokon’ny ireo mozika nentin-drazana ao anatin’ny hetsika. IFM ANALAKELY “Dialogue”, seho jazz hiarahana amin’i Laurent Coq Rakikira voalohany hiarahan’ny feo, ny piano ary ny gitara. Hitondra sy hampahafantatra ny “dialogue”, etsy amin’i Institut français de Madagascar (IFM) anio amin’ny 7 ora sy sasany hariva i Laurent Coq telo mirahalahy. Mpamorona sy mpitendry piano frantsay, izay efa nitondra ny talentany tany Paris sy New York, toe­rana nipetrahany teo anelanelan’ny 2000 sy ny 2005. Nandritra ny fampianarana mozika nataony no nifanenany tamin’i Ralph Lavital, izay hitondra ny gitara amin’ny rakikira sy amin’ny fampisehoana. Efa nitondra endrika vaovao teo amin’ny tontolon’ny jazz io fiarahana io fa niampy sy nanome tsiro hafa ny mozika ny feo nentin’i Nicolas Pélage. JAO’S PUB – AMBOHIPO Mozika mafana hiarahana amin’i Mam’Be Mpanakanto efa niara-niriaria tamin-dry Jaojoby. Hitondra mozika mafana eny amin’ny Jao’s Pub eny Ambohipo anio alina i Mam’be. Mpitendry gitara no nahafantarana azy tany am-piandohana ary efa ho 5 taona izao no nametrahany ny anarana Mam’Be. Hanolotra mozika mafana izy amin’io takariva io ary efa nahafantarana azy rahateo ilay hira «Simba». Tsy mifantoka amin’ny gadona tokana fa mivoy sy miangaly karazana gadona maro i Mam’be, ka ankoatra ny «Simba» dia anisan’ny hoentiny sy hanakoako eny Ambohipo ihany koa ny «Vadiako tia zaho», Zaza gasy misôma»… Hanohy ny hetsika any amin’ny Jao’s pub kosa ny sabotsy sy ny alahady ny fanasongadinana ireo fitrandrahana ny gadona nentin-drazana sy ny fampiarahana izany amin’ireo zava-maneno maoderina.
Toro anatra, Mpanoratra Rijakely, 05.06.2012, 09:55	FIARAHAMONINA